Beesha (Muumin Aadan) Oo Laga Baryey Kuna Gacansayrtay In Qashinka Ku Jira Xerada 54 -Aad Ee Garoowe Loo Soo Raro Gaalkacyo – Codka Qaranka Tanadland
Gunta Habar-Majeerteen Mindhaa Gawda Kam Deyno!!
Horjoogaha cusub ee beesha dhebayaco (C/weli) wuxuu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 1959 -kii. Aabihiis (Maxamed Cali Gaas) na waxaa dagaal lagu qabtay oo la bireeyey (1954 -tii) isaga oo 5 sano jir ah. Inan gumeed (Maxamed Cali Gaas) isaga oo magaalada dhuusamareeb jooga ayaa waxaa gaarey in beeshiisa labo dagaal oo is xiga lagu jebiyey. Dagaaladaas oo kala ahaa (Foodyacade) iyo (Dhudub).
Nasiib wanaag, (Maxamed Cali Gaas) maalintii uu reerkiisa u soo ciidamay oo u dhexyimid waxay ahayd goobtii (Car-Istaag). Dagaalkii (Car-Istaag) na wuxuu ahaa duulaankii ugu cuslaa ee ay beesha (Muumin Aadan) qaado. Jabkii ugu xumaana loo geystey beesha Dhebayaco oo ay ku quusatay. Goobtii (Car-Istaag) waxay goobihii kale uga duwaneyd. Daalkii (Car-Istaag) wuxuu ahaa weerar loogu talogalay saldhiga ciidan ee dhebayacada in lagu qabto. Iyadoo hadafku uu ahaa hubka iyo saanada ay haystaan intaanay ku dagaalgelin in laga furto.
Qorshehaas oo beesha (Muumin Aadan) siday rabeen ugu meelmaray. Dagaalkii (Car-Istaag) Dhebayaco bari-weyn markii la weeraray, oo ay xabadda dhawaaqeeda maqleen argagax ayaa ku dhacay waana ay kala firxadeen. Nin istaaga oo dagaal u soo jeestana waa laga waayey. Dagaalkii (Car-Istaag) 39 nin oo dhebayaco ah ayaa iyaga oo cararaya dhabarka laga toogtey. Waxaana maxaabiis ahaan looga qabtay 11 nin.
Nasiib wanaag, (Maxamed Cali Gaas) wuxuu nasiib u helay in uu ka mid noqdo 11-ka nin ee beesha (MA) ay dagaalka ku qabatay. Nimankii qabtay (Maxamed Cali Gaas) waxay sheegeen, in la qabtay isaga oo aysan qorigiisa hal xabad ahi aysan ka dhicin uuna buuxo. Taas oo ah wax lala yaabo marka la eego meesha uu ka soo duulaan tegey isaga oo ah shaqaale dowladeed. Isla goobtii lagu qabtay ayaana isaga iyo maxaabiistii kalaba lagu bireeyey, oo toorey ayaa nafta loogaga gooyey.
Nasiibdarada kale ee (Maxamed Cali Gaas) ku dhacday waxay ahayd goobtii (Car – Istaag) ee beeshiisa lagu jebiyey dagaal kama uusan danbeyn, ee waa ay isdhiibtey markii waxay hub iyo saanad haysteen maalintaas laga furtay.
Sawirka (AUN. Dr. Faysal Xaaji Cilmi) oo ku geeriyoodey qarixii tiyaatarka ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, dad reer Tanadland ah oo yaqaana shakhsiyadda (C/weli) waxay sheegeen inuu yahay shaqsi aad u diciif ah, oo lagaba yaabo marka qof aysan is aqoon la yiraahdo waa reer Tanadland in uu isku kaadsho. Laakiin saas oo ay tahay intii karaankiis ah (C/weli) wuxuu isku dayaa in uu ceebtiisa qarsado. Berigii C/weli balaayada ku meelgaarka ah la yiri gafuurka qabo. Wuxuu madaxtooyada ka sameeyey xafiis qaabilsan xiriirka dibeda oo kala taliya arimaha dibeda. Xafiis kaasna wuxuu u magacaabay nin reer Tanadland ah lana yiraahdo (Dr. Faysal Xaaji Cilmi). Faysalna dhalinyaro reer Tanadland ah ayuu ilaaliyeyaal ka dhigtay.
Mideeda kale (C/weli) dagaalkii labada maalmood ee beeshiisa lagu jebiyey ragii wax ka abaanuley buu ka mid ahaa. Weliba ilaaladiisii Gaalkayo ayuu uga tegey si ay dagaalka uga qaybqaataan. Isagoo islahaa malaha tolkaa maanta Hartiga ay wataan ayaa wax ka dhicindoona. Maalintii labaad ee mahbarka iyo midiidinkooda la jebiyey. Maalintii ka danbeysey ayaan waxaan la hadlay mid ka mid ah dhalinyarada reer Tanadland ee joogey xafiiska xiriirka dibeda. Waxaana ku iri “War agoonkii C/weli ahaa tolkiisna waa la jebiyey, isaga iyo ilaaladiisiina is’arkimayaan oo waa la laayey, ee ninka xaalkiisa iiga waran?”
Ninkii aan wareysanayey isaga oo qoslaya ayuu wuxuu yiri “Waa’u suuxsanyahay oo madaxa ayaa dhiig uga furmay, dadkana waa laga qarinayaa oo dhaqtar xataa inay geeyaan waa lagala baqayaa”. Sidaynu ognahay C/weli naxdintii uu ka naxay jabkii loo geystey beeshiisa dhiigfuran kii uu ka qaaday waa u ka kacay. Balse wejigiisu wuxuu yeeshay gubad madoobaad ah oo aan jirka intiisa kale u ekayn.
Maxay Tahay Sababta Dhebayaco Magaalada Garoowe Ay
U Dayacayso Oo Ay U Rabto Inay Mooryaanteeda Gaalkacyo Isugu Geyneyso?
Sababtu waxa weeye beesha Dhebayaco xasuuq joogto ah ayaa ku socda sadex furimoodna waa ay ku furanyihiin.
1) Mida ugu darani waa beesha (Muumin Aadan) oo mudo dheer xasuuq joogto ah ku haysey. Rag 270 nin ahna magaalada Gaalkacyo si bareer ah ugaga diley dhawrkii sano ee ugu danbeeyey.
2) Beesha (Sacad) oo jidka wadaagsin Dhebayaco uga dheregtey, markay ugu yaraatana sadexdii sanadood ee ugu danbeeyey ka dishey 80 qofood oo Dumar, Rag iyo Caruurba isugu jira.
3) Furinta sadexaadna waa gobolka (Bini Jacfarland) ee bariga sanaag oo ay degto beelweynta (Ugaaslabe). Beesha (Ugaaslabe) waa beesha sadexaad ee ugu muhiimsan beelaha reer Somaliland. Waxayna hada ciidamadeedu ay gacanta ku hayaan degaamada bariga sanaag oo ah halka ugu sahlan ee laga kala xirikaro garoowe iyo Bosaso. Beesha (Ugaaslabe) waxay kaloo haysaa xilka sadexaad ee ugu sareeya somaliland oo ah wasiirka gaashaandhiga. Nin kaas oo ah (Axmed Xaaji Cali Cadami). Laakiin maqaalkaan waxaan ku eegayaa oo keliya labada furimood ee dhebayaco uga furan Mudug iyo sida loogu xasuuqo. Furinta halista ah ee dhebayaco uga furan gobalka (Bini Jacfarland) maqaal gaar ah ayaan ku falanqayn doonaa hadii rabi idmo.
Dhebayacada beesha (Muumin Aadan) ay ku layso magaalada Gaalkacyo badankooda waxay ku laysaa xaafadda agoonta ee galbeedka (Israac). Waxaana ugu danbeeyey 5 tii nin ee sida xun loogu jar-jaray xaafadda agoonta taariikhdu markii ay ahayd (21/01/2014). Intii ayaan taas ka danbeysey beesha (Muumin Aadan) dhebayaco maysan layn, balse waxaa hubaal ah in mar aan fogeyn ay hilbahooda wari doonaan iyaguna waa ay ogyihiin.
Laakiin taas macnaheedu maaha (21/01/2014) intii ka danbeysey dhebayaco kale gobalka Mudug laguma dilin.
Mudadaas intii ka danbeysey beesha (Sacad) waxay agoonta ka dileen 5 qofood oo kala ah 4 nin iyo naag. subax Jimce ah oo ay taariikhdu ahayd (01/11/2013) ayaa waxaa Gaalkacyo ka baxay wadaado beesha Sacad ah. Wadaadadaasi waxay siyaaro ugu socdeen degaanka Godod. Ceelka godod oo ay marto wadada wadaagsinna waxaa jooga 60 wiil oo dhebayaco ah. Halkaasna loo geeyey marka wadada dad lagu laayo inay u gurmadaan. Wadaadadu markii ay tageen ceelka godod iyaga oo wata dhowr gaari, ayaa waxaa rasaas ooda uga qaaday maleeshiyadii dhebayacada ahaa.
Wadaadada beesha Sacad oo aanan sidan wax hub ah haba yaraatee halkaas waxaa uga shihiidey 5 wadaad. Waxaana la dhaawacay 15 wadaad oo 8 ka mid ah la sheegay in si xun loo dhaawacay. Markaas ayaa waxaa warbaahinta la hadlay nin u hadlay beesha Dhebayaco, lana yiraahdo (Cabdicasiis Siciid Baduugaaye) oo sheegay in beeshiisa beesha Hawiye ay soo weerartay. Isaga oo ka beensheegay xasuuqii loo geystey wadaadada beesha (Sacad) iyo sidii ay wax u dheceen.
Beesha dhebayaco marka ay leedahay dowladda federaalka ayaa hub soo siisay beesha Sacad, ayna leedahay Hawiye ayaa na soo weeraray. Ujeedadoodu waxay ahayd in maleeshiya beeleedka beesha harti ee ay ku adeegtaan. Inay gobalka Mudug keenaan si ay u joojiyaan xasuuqa beeshooda lagu hayo. Iyaga oo is leh beesha Harti aad ku
beerdulucsataan Hawiye ayaa na soo weeraray.
Anigu dagaalo badan oo sagaashameeyadii gobalka mudug ka dhacay iyo jubooyinkaba ayaan ka qaybqaatay, Dhebayacona waxaan ogaadey inaysan dhaqanba u lahayn dagaal. U fiirso hadaad maqashid meel ay dhebayaco ka dagaal gashay, keligeed ha ahaato ama cid kale hala socoto’e waxaa laasim ah in meeshaas masiibo xuni ay ka dhacdo. Lana jebiyo dhebayaco iyo waxa la socda. Sababta oo ay tahay Dhebayaco inay cararto mooyaane weligoodba rag iskama aysan dhicin, dhaqanna umaba ay laha inay rag iska dhiciyaan. Beesha (Muumin Aadan) oo ujeedada ay dhebayacada xasuuqa joogtada ah ugu hayso uu yahay inay dagaal la galaan. Dhebayacaduna aysan rabin inay fursad u siiyaan dagaalka ay beesha (MA) raadinayso.
Beesha dhebayaco awoodeeda oo dhan hadii meel laysugu keeno oo awooda reer Tanadland 5 meelood marka loo qaybiyo, Meel ka mida laga hor geeyo. Waxaa hubaal ah inay mudo gaaban uga dhex baxahayaan, oo ay xaynba dhinac u cayrsanayaan.
Dhowaan beesha beesha (MA) waxay dhebayaco kula shirtay magaalada Gaalkacyo iyo caasimadda gobalka Xariir ee Galdogob. Labadii jeerbana waa lagu gacansayray qorshihii ay wateen. Hadalada beesha (MA) ay ayaamahan ku maadsadaan oo C/weli baryadiisii ay kala bexeen, waxaa ka mid ah “Walaalayaal dadkii waa dhamaaday”.
Hadaan u soo noqdo ugaarsiga ay beesha sacad ka wado wadaagsin. Beesha Sacad markii wadaadadoodii la laayey waxaa dhacday wax aan horay u dhici jirin. Niman yar oo aan abaabuleyn oo xoolodhaqato ah ayaa weerar ku soo qaaday mooryaantii wadaadada laayey. Niman kaasi ceelka godod oo ku yaala meel ban ah oo an dhir lahayn, ayey ciidan aad u yar oo an tigniko fiican wadan ay ku weerareen. Markaas ayaa 4 nin oo kale laga diley rag xayn ahna laga dhaawacay. Iyada oo maleeshiayadii dhebayacada oo dhufeysyada ku jirey hal nin oo keliya uu ka dhaawacmay.
Nimanka Sacad ee weeraray nimanka dhufeysyada ku jira waxay yeelikareen, inay inta wadada wadaagsin dhebayaco ku laayaan ay dhexda u galaan nimanka godod jooga marka ay soo gurmadaan. Taasi waxay kaloo u suuragelin lahayd ciidanka yar ee godod weeraray. Inay maleeshiyada dhebayacada ay si sahlan tignikada uga furtaan iyagana ay jidka waraan hilibkooda. Beesha Sacad markii sagaal nin laga diley rag badanna laga dhaawacay ayey dooxatayn waxay ku dileen labo wiil iyo hooyadood, Mar kalena waxay ku dileen wadada wadaagsin labo nin oo safar ah.
Hadaan wax yar idiinka sheego raga beesha (MA) liiska ugu jira ee ay ku talojirto inay dhawaan qaarajiso, waa nimanka sheegtay inay yihiin golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo. Waxaana shaqo ka dhiganaynaa laynta cid ala iyo cida aanu u aragno inay la shaqayso mooryaanta Pintiland. Galbeedka xaafadda Israac mudo 12 sano ah waxay beesha (MA) u ahayd kawaan ay dhebayacada ku qalato. Nimanka dhowaan faanay ee sheegtay waxaysan noqonkarinna, ha ogaadeen inay liiska tirada 270 ka nin ee aanu beeshooda ka diley ay ku biirahayaan. Hana ogaadeen inaysan tol lahayn oo marka aanu layno aysan deero deero u hardiyi doonin.